admintriatra, auteur sur - Page 1851 sur 1851
18/11/2016 admintriatra 0
Mampametra-panontaniana hatrany ny fomba atao ahazoana ny fahatokisan’ny rehetra eo amin’ny fitantanana ny zotram-pifidianana. Satria raha tsy azo ny fahatokisana, dia zava-poana ihany ny ezaka fanatsarana rehetra. Hatramin’izay tokoa mantsy dia voakiana hatrany ny vaomiera …Tohiny
Niditra am-ponja sy nahazo sazy mihantona tamin’ny tsy misy dikany, izay no azo ilazana ireo olona tafiditra tamin’iny raharaha Soamahamanina iny. Nitabataba sy nandany fotoana nivoy ireny hetsika maro isan-karazany ireny fotsiny ireo hainoamanjery sasany …Tohiny
Volamena ao Betsiaka:AM-POLONY KILAO ISAKA NY HERINANDRO
Mahavariana ny tsy niresahan’ireo hainoamanjery mpomba ny fanonganam-panjakana ny fitrandrahana volamena ao Betsiaka, tanàna kely eo anelanelan’Ambilobe sy Vohemar. Am-polony kilao isaka ny herinandro ny volamena mivoaka ao amin’io tanàna io araka ny vaovao marim-pototra …Tohiny
« 1 … 1 849 1 850 1 851
Fanodinkodinam-bola tao amin’ny Jirama : Haverina hotsaraina Mamy Ravatomanga